ओलम्पिक छनोट : नेपालले भारतलाई बराबरीमा रोक्यो
काठमाडौँ, २२ कात्तिक । ओलम्पिकको एशियाली महिला फुटबल छनोटको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत आज भएको नेपाल र भारतबीचको खेल १–१ गोलको बराबरीमा टुङ्गिएको छ ।
म्यानमाको याङगोनस्थित थुवुन्ना रङ्गशालामा भएको समूह ‘सी’ अन्तर्गतको पहिलो खेलमा दुवै टोलीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् । खेलमा पहिलो अग्रता भने नेपालले लिएको थियो । खेलको ११औं मिनेटमा नेपाली टोलीकी कप्तान नीरु थापाले गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता लिएकी थिइन् ।
सन् २०१६ मा भएको दक्षिण एशियाली खेलकूदको लिग चरणमा नेपाल र भारतको खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको थियो । अर्को वर्ष जापानमा आयोजना हुने ओलम्पिक खेलकूदअन्तर्गत पहिलो चरणमा एशियाबाट १८ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । समूह ‘ए’ र ‘बी’ मा पाँच÷पाँच राष्ट्र रहेका छन् भने समूह ‘सी’ र ‘डी’ मा चार/चार टोली छन् ।
प्रत्येक समूहका विजेता र उपविजेताले दोस्रो चरणको छनोटमा स्थान बनाउने छन् । तेस्रो हुने समेत दोस्रो चरण पुग्नेछ । ओलम्पिकको एशियाली छनोटअन्तर्गत नेपाल रहेको समूह ‘सी’मा भारत, म्यानमा र बङ्गलादेश छन् । नेपालले दोस्रो खेल कात्तिक २५ गते म्यानमासँग तथा कात्तिक २७ गते बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ । रासस
मैत्रीपुर्ण खेलमा वेल्स विजयी
जर्मनी पराजित हुनबाट जोगियो
‘रियल मड्रिडबाट खेल्ने मेरो सपना छ’
लिभरपुलका प्रशिक्षक उर्गेन क्लपको कमाइ कति ?
आइपिएल खेल्न भारत उडे सन्दिप
आईसीसी टी–ट्वान्टी विश्वकप एसिया छनोट : खेल तालिका सार्वजनिक
महिला साफ च्याम्पियनसिप : सेमिफाइनल खेलहरु आज
मेस्सी भर्सेस एमबाप्पेः यस सिजन को कति उत्कृष्ट ?
बार्सिलोनाबाट लियोनल मेस्सीले कुन सिजनमा कति गोल गरे ?
‘रियल मड्रिडको संकट समाधान गर्न पर्याप्त खेलाडी छैनन्’
रियल मड्रिडका डिफेण्डर राफायल भराने क्लब छोड्ने तयारीमा
सलाह र इकार्दी किन्ने तयारीमा रियल मड्रिड
अन्ततः रोनाल्डोलाई कारबाही भयो
बार्सिलोनामा खेल्ने अवसर कुरिरहेका बोयटिङ
च्याम्पियन्स लिगको उपाधि बार्सिलोनाले जित्न सक्ने !
एमबाप्पे विश्वकै महँगो खेलाडी बन्न सक्ने